जनताको जनवादलाई बुझेर अगाडि बढ्ने कि पतन वा समाप्ति रोज्ने ?::Nepali News Portal from Nepal
जनताको जनवादलाई बुझेर अगाडि बढ्ने कि पतन वा समाप्ति रोज्ने ?
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा एउटा विशेष दिन हो, २१ फागुन। यो दिनले चरम दमन, स्वेच्छाचारी थितिहिनताको परकाष्टा कस्तो हुन्छ भन्ने प्रतिविम्बित गर्छ। साथै यो दिनले तानाशाही विरोधी आन्दोलन कस्तो हुन्छ, कसरी जान्छ, कति साहसिक हुन्छ र बलिदानले कति प्रेरणा दिन्छ भन्ने पनि देखाउँछ। २१ फागुन २०२९। साँझको बेला। झापा आन्दोलनका अगुवा पाँच योद्धाहरुलाई झापा जेलबाट इलाम सार्ने भनेर लगियो र बाटोमै गोली हानी हत्या गरियो।
त्यसैले यो दिनले एउटा प्रेरणा दिन्छ, एउटा संकल्पका लागि फेरि उद्घोष गर्छ। त्यो दमन वा त्यो हत्याकाण्ड नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गरिएको पहिलो र ठूलो, एक ढंगले भन्ने हो भने पहिलो र अन्तिम हो। त्यति ठूलो संख्यामा १९९७ सालमा चार जनाको हत्या भएको थियो। २०३१ असोजमा नख्खु जेलबाट निकालेर नख्खु ओरालोमा चारजना युवाहरुको हत्या भएको थियो। जेलबाट निकालेर गरिएको झापाको त्यो हत्या नै सबैभन्दा ठूलो घटना थियो र सबैभन्दा ठूलो दमनपनि। यस्तो जघन्य अपराध तत्कालिन सत्ताले किन गर्नु पर्यो ?
त्यसको कारण थियो, झापा आन्दोलनले बोकेको सन्देश। त्यो आन्दोलनले जुन सन्देश बोकेको थियो, जुन उद्देश्य लिएको थियो, जुन अभिप्रेरणा दिएको थियो, जुन न्यायको शंखघोष गरेको थियो, ती सबै कुरालाई एकमुष्ठ समाप्त पार्ने प्रयास थियो त्यो हत्याकाण्ड। युवाहरुमा आन्दोलन र परिवर्तनप्रति बढ्दो जुन आकर्षण थियो, ती योद्धाहरुको हत्या गरेर त्यो आकर्षण समाप्त पार्ने प्रयास थियो। त्यो निर्मम हत्याकाण्डमा जो मारिनु भयो, उहाँहरुप्रति म हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु।
त्यसकारण झापा आन्दोलनले त्यसबेला लिएको प्रतिवाद र प्रतिरोधको नीति ठीक थियो। हिँसा कतिखेर ग्राह्य हुन सक्छ, कतिखेर विल्कुल ग्राह्य हुँदैन भन्ने कुरा त्यो बेलाको परिस्थितिले निर्धारण गर्छ। झापा आन्दोलनलाई नै हेरेर, त्यस्तो दमनकारी अवस्थामा गरिएका प्रतिरोधलाई हेरेर वा २००७ सालको आन्दोलनमा जनताले उठाएका हतियारलाई हेरेर हिँसात्मक संघर्ष सधैँ सही, औचित्यपूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता दिइयो भने त्यो सही हुँदैन। अर्थात् शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटाहरु उपलब्ध भएका बेला उठाइएको हतियार कुनै अर्थमा पनि सही हुन सक्दैन। यस अर्थमा झापा आन्दोलनले लिएको सङ्घर्षको बाटो सही थियो।
चाहे मनमोहन अधिकारी हुन्, चाहे पुष्पलाल वा वीपी कोइराला, त्यो आन्दोलनप्रति सबैको एउटै धारणा रह्यो। त्यसकारण त्यो आन्दोलनका उद्देश्य महान् थिए। समर्पणको भाव, मूल्य–मान्यताप्रति इमानको भाव, इमानका साथ समपर्णको भाव– यी चिजहरु त्यो आन्दोनका ‘एसेट’ (सम्पति) हुन्, त्यसका पूँँजी हुन्।
त्यो आन्दोलनका क्रममा अरु पनि केही साथीहरु बलिदान हुनुभयो। त्यसपछि चन्द्र डाँगी जस्ता साथीहरु पनि मारिनु भयो। धेरैले यातना, जेलनेल र कष्टपूर्ण जीवन भोग्नुभयो। जेलमै मृत्युवरण जस्ता कुराहरु पनि सहनु पर्यो। बैधव्य, बात्सल्यबाट बञ्चित, आर्थिक अवस्था डाँवाडोल, सम्पति लुटपाट– यी सबै कुरा झेल्नु पर्यो। निर्दोष मान्छेहरु पनि त्यसमा मुछिए तर ती निर्दोषहरुले शिर झुकाउन मानेनन्। आन्दोलनको शिर निहुरन दिएनन्। तिनले ‘मेरो कारणले आन्दोलनको गरिमा घट्नु हुँदैन, म असम्बन्धित मान्छे थिएँ, तर मैले शिर झुकाएँ भने आन्दोलनको शिर झुक्छ, आन्दोलनको शिर झुक्यो भने त्यसका महान उद्देश्यहरु बिथोलिन्छन्, त्यसका उद्देश्यहरु धुमिल हुन्छन्, त्यसकारण मैले आफ्नो शिर झुकाउनु हुँदैन’ भन्ने ठाने। जो मानिसहरु अनुचित ढंगले मुछिएर जेलमा हालिएका थिए, दमनमा पारिएका थिए, तिनले पनि आन्दोलनको गरिमाको ख्याल राखे।
यी कुरा बुुर्जुवा पार्टीहरुले पनि गर्छन्। तर बुर्जुवा पार्टीहरु राजनीतिक स्वतन्त्रतामा सिमित छन्। हामी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि, आर्थिक सामाजिक अधिकार सहितको राजनीतिक अधिकारको कुरा गरिरहेका छौँ। हामीले वास्तविक सामाजिक परिवर्तन सहितको परिवर्तनको कुरा गरेका छौँ। हामीले राजनीतिक परिवर्तन मात्रै भनेका छैनौँ। आमूल सामाजिक परिवर्तन र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन हुनुपर्छ भनेका छौँ। यस्ता कुराको पक्षपोषण जनताको बहुदलीय जनवाद वा जनताको जनवादले गर्छ। जबजले पूर्ण लोकतन्त्र अर्थात् सबै पक्ष समेटिएको लोकतन्त्र भन्छ। यहाँ आइपुग्ने सवालमा जबजले लामो, बलिदानपूर्ण यात्रा गरेको छ। कसैलाई समयमै यो कुरा बुझ्न अलि समस्या परेको होला। यसलाई या त बुझ्नु पर्छ या समाप्त वा पतन हुनुपर्छ। अब सिर्फ तीन वटा बाटा छन्– जनताको बहुदलीय जनवादलाई बुझेर, अंगिकार गरेर सफलतापूर्वक अगाडि बढ्ने बाटो, पतनको बाटो वा समाप्तिको बाटो। यी तीन बाहेक अन्य बिकल्प छैनन्। (प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुराकानीका आधारमा तयार )